जीवन शैली Archives - ejhajhalko.com
सावधान ! यि गल्ति कहिलै नगर्नुहोस् ,जसले बिगार्न सक्छ वैवाहिक जीवन
एजेन्सी— वर्षौसम्म प्रेम सम्बन्धमा रमाएपछि विवाह गरेर घरजम गरेकाहरुको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको हामीले देखेका हुनसक्छौँ । प्रेममा रमाएको एक जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनीहरुबीच कसरी दूरी बढ्छ भन्ने कुरा धेरैले ख्याल नगरेका हुनसक्छन् । तर, सम्बन्धबारे कहिलेकांही हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ । पुरानो प्रेमबारे आ...
के तपाईलाई थाहा छ,मोटी महिलाका श्रीमानहरु १० गुना बढी खुशी
भनिन्छ, सुन्दरताको आंकलन उसको अनुहार र शारिरीक वनावटसँग होइन उसको बानी व्यवहारसँग गर्नुपर्छ । अर्को पनि भनाई छ , फस्र्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इन्प्रेशन । हो, हामीले मानिसको बानी व्यवहारबाट उसको सुन्दरताको आंकलन गर्नुअघि नै उसको हाउभाउ र शारिरिक वनावटले हाम्रो मानसपटलमा उनीबारे आफै मुल्यांकन भईसकेको हुन्छ । महिला हो...
महिलाहरुले जापानिज स्वेटर लगाउँदा पुरुषहरु भुतुक्कै
जापानमा नयाँ फेसनका रूपमा आएको ‘भर्जिन किलिङ स्वेटर’ अनलाइनमा बिक्रीलाई राखिएको केही समयमै सोल्ड आउट भयो। स्वेटरको पछिल्लो भागमा तुना राखेर घाँटीमा गोलोपन दिइएको छ। यो स्वेटर लगाउँदा युवतीको दायाँ र बायाँ भागबाट मात्र स्तन देखिन्छ भने अघिल्लो भागबाट केही पनि देखिँदैन। स्वेटरको पछिल्लो भागलाई केही तलसम्म पुर्याइएका का...
विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा पोखरेलको निधन
काठमाडौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा बाबुराम पोखरेलको निधनमा विद्यार्थी संगठनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । अनेरास्ववियुका अन्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङ र नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ड...
सुन्तला सेवनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने ८ फाइदाहरु
अहिले नेपाली फलफूल बजारमा सुन्तलाले धेरै हिस्सा ओगटेको देख्न सकिन्छ। सुन्तलाको मौसम भएकाले पनि बजारभरि सुन्तला देखिनु सामान्य नै हो। चिसो मौसममा दिउँसो घाम ताप्दै सुन्तला खानुको आनन्द तपाईंहरु धेरैले लिनु भएको होला। सुन्तला खाँदा जति मिठो र रसिलो हुन्छ, त्यति नै पोषक तत्वका हिसाबले पनि फाइदाजनक छ। जुस बनाएर होस् व...
शिक्षकले बलात्कार गरे पछि ,सबै घटना चिठीमा लेखेर विष पिइन् छात्राले
ललितपुर। आफ्नै शिक्षकले स्कुलमै आफूलाई बलात्कार गरेपछि ९ कक्षामा अध्ययनरत एक छात्राले विष पिएर आत्महत्याको प्रयास गरेकी छिन् । उनलाई गम्भीर हालतमा अस्पताल भर्ना गरिएको छ । शिक्षकले धम्की दिएका कारण ती किशोरीले २ दिनसम्म यो कुरा परिवारसँग लुकाएर राखेकी थिइन् । गत शनिबार उनले एउटा चिठीमा शिक्षकको सबै कर्तुत लेखेर आत्...
उच्च रक्तचापको जोखिम उपत्यका र पहाडका बासिन्दाको तुलनामा तराईमा कम
अस्वस्थकर खानपान अव्यवस्थित जीवनशैली र वंशाणुगतजस्ता कारणले हुने उच्च रक्तचापको जोखिम उपत्यका र पहाडका बासिन्दाको तुलनामा तराईका बासिन्दामा कम देखिएको छ । विभिन्न प्रकारका जोखिम बृद्धिसंगै नेपालमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै जाँदा क्षेत्र र भुगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याका आधारमा समेत भिन्नता देखिएको हो । जन...
यस्ताे हुन्छ, बियर पिउने युवतीका स्वभाव ?
एजेन्सी । अक्सर यस्तो देखिन्छ कि जो–जो व्यक्ति सँगै ड्रिंक्स गर्छन्, उनीहरूको दोस्ती निकै गहिरो हुन्छ। यस्तै केही विषय युवतीबीच पनि हुन्छ। तपाईं यो तथ्य थाहा पाउँदा हैरान हुन सक्नुहुन्छ कि बियर पिउने युवतीसँग डेट गरेपछि धेरै झन्झटबाट जोगिन सकिन्छ, जुन सामान्य प्रकारका हुन्छन्। बियर पिउने युवतीमा निम्न प्रकारका खुबी ह...
बाबियाचौर । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीमा शनिबार निःशुल्क मुटु स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रश सोसाइटी भुरुङ तातोपानी उपशाखाले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा एक दिने शिविर सञ्चालन गरेको हो । अन्नपूर्ण, रघुगंगा गाउँपालिक...
सन्तानको समान स्याहार गर्नै जोडीको यौनजीवन समेत सुखमय
बालबालिकाको पालनपोषण समेत सँगसँगै गर्ने दम्पत्तिमा अझै बढी खुसीको बहार आउने र यौन जीवन पनि सुन्दर हुने एक अमेरिकी अध्ययनले दर्शाएको छ। अमेरिकामा ४ सय ८७ परिवारहरुमा गरिएको एउटा अध्ययनमा बालबालिकाको सँगसँगै रेखदेख गर्ने दम्पत्तिले यौन र भावनात्मक रुपमा पनि सन्तुष्टि पाउने जनाइएको छ। सन् २००६ को वैबाहिक जीवन सम्बन्धको ...
जाडोमा मर्निङवाक गर्दा ख्याल गर्नुहोस् यी चार कुरा
नियमित मर्निङवाक गर्ने बानी छ भने यो चिसोमा पनि पक्कै निरन्तरता दिनुभएकै होला । तर, चिसोमा मर्निङवाक गर्दा अन्य शारीरिक समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले, केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ : कपडा जाडोमा मर्निङवाक गर्दा लगाउने कपडामा ख्याल पु¥याउनुपर्छ । गर्मी मौसम र जाडोमा लगाउने कपडा फरक हुनैपर्छ । चिसोको असरबाट जोगिन र ...
बच्चा हुर्काउने माल्भिका मेथडः स्मार्ट आमाको चाइल्ड केयर
काठमाडौं । उनलाई देख्दा लाथ्यो, अविवाहित कलिली कन्या हुन् । निलो गाढा जम्स सुटमा ठाँटिएर फ्यानहरुले घेरिएकी ती सुन्दरीलाई देख्दा विवाहित भएको कसले भन्ला र ? पहिलोपल्ट देख्ने र भेट्नेलाई उनी एक सन्तानकी आमा हुन् भनेर पत्याउन गाह्रै पर्ला । हजूर, उनी अर्थात् सदावहादर सुन्दरी माल्भिका सुब्बाको हामी चर्चा गरिरहेका...
अमेरिका जानुअघि नेपाली चलचित्रमा रमेश उप्रेतीकै जमाना थियो । ती दिनहरुमा हिरोको विम्ब यस्तो थियो, बलिष्ठ, हृष्टपुष्ट, चकलेटी । त्यही धङ्धङी बोकेर अमेरिका पुगेका उनी लामो बसाईपछि नेपाल फर्किए । प्रवासी जीवनमा पनि उनको ‘हिरोइज्म’ सकिएको रहेनछ । नेपाल र्फकनासाथ सिनेमा निर्माणमा लागे । तर यसबेला नेपाली समाजले बनाएको हिर...
धिरज राईः स्टेज किङ ब्याक अगेन
उनको गोडामा डिंगो बुट थिएन । पहिलेझैं बेली जिन्स उनले लगाएका थिएनन् । ज्यानमा फिटिङ्स ज्याकेट थिएन । अनि गलामा लकेटहरु पनि झुण्डिएका थिएनन् । कुनै बेलाकाका ‘स्टेज किंग’ धिरज राई यसपालि फरक हुलियामा देखा परे । अनामनगरको एक क्याफेमा हामीले भेटदा उनी चुज जिन्स, टिसर्ट, स्पोर्टस् सुजमा ठाँटिएका थिए । झ्याप्ले केस पाल...
नाइटक्लबमा घन्कियो रातो र चन्द्र सुर्य, राजपरिवार देखि सेलिब्रेटिको मस्ती (भिडियो सहित) 11 views
विप्लव (नेकपा)का कास्की सेक्रेटरी आक्रोस सहित क्रान्तिकारीका दुई केन्द्रीय नेता जेल चलान7views
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका जनस्वास्थ्य अधिकृत १ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ4views
महिलामाथि डोजर चलाउने चालक पुर्पक्षका लागि जेल चलान